Ciidamada DF Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya oo isaga baxay deegaanka Halgan iyo Al-shabaab oo la wareegtay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamada DF Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya oo isaga baxay deegaanka Halgan iyo Al-shabaab oo la wareegtay
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Halgan oo qiyaastii 40-km u jirta magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab ay haatan si buuxda ula wareegeen deegaankaasi, kadib markii ay isaga baxeen ciidankii hore ugu sugnaa ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya.
Waxaa wadooyinka deegaanka Halgan maanta lagu arkayaa dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab oo aad u hubeysan, iyadoona durbadiiba qaar ka mid ah dadka deegaankaas ay bilaabeen inay iskaga baxaan halkaas.
Dadkaasi ayaa sheegaya inay ka cabsi qabaan in ciidankii dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ee halkaasi isaga baxay ay dagaal rogaal celis halkaasi kusoo qaadaan, islamarkaana uu dagaalkaasi qasaare kasoo gaaro.
Ciidanka Itoobiyaanka ah ee isaga baxay deegaanka Halgan ayaa la sheegayaa inay u ruqaansadeen dhinaca magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan, iyagoona kadib usii gudbi doonna dhinaca xuduuda ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya.
Ilaa iyo haatan lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay ka bixitaanka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya, ay iskaga baxeen deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan.
Si kastaba ha ahaatee, ciidamada Itoobiya ayaa muddooyinkii ugu dambeeysay isaga baxaayay deegaanada ay gacanta ku haayeen oo ay kaga sugan yihiin gobolada Hiiraan iyo Galgaduud, iyagoona dhawaantaan isaga baxay deegaanada Ceel Cali iyo Budbud oo ka kala tirsan labadaasi gobol.